कालो समुद्रमा पेन्सन। 2021 वर्ष आवासको लागि मूल्य। फोटो, समीक्षा, लागत, भाँडा सस्तो, यात्री ट्राभल गाईड। ओम। एक।
ST2> STATAINIM पूर्वाधार
पेन्सन कोठा फाउन्डेन "दक्षिण रात"
सुन्दर "फेरूको फूल" समुद्रको नजिकै "US2>
विन्डोजबाट र जटिलहरूको क्षेत्रबाट त्यहाँ समुद्रको सुन्दर दृश्य हो। Patacackoa, जुन ठाडो संग सर्न धेरै छ। तर यो तथ्यले "फोरो फूल" मा अतिथिहरू रोक्न सक्दैन, किनकि पहाडमा 3-4- .0 मिनेटमा उनीहरू पूर्ण रूपमा दृश्यलाई रमाईलो गर्न अनुमति दिन्छन्। क्रिमियाको यो रिसोर्ट नजिक समुद्री तराईको असाधारण सफा मानिन्छ।
बोर्डिंग घरको क्षेत्रमा त्यहाँ एक निजी क्याफे छ। मौसम को उचाई मा छैन, बिहानको खाजा को लागत मूल्य मा समावेश छ। साथै छुट्टै सेवाहरूले सेवाहरू प्रदान गर्दछ:
फोरोसमा एक सानो लक्जरी: "विल रेकर्ड"
पेन्सन "फोनो बीच बीच": सबैको लागि आराम गर्नुहोस्
कोटी को श्रेणी
रसियामा कालो समुद्री निवृत्तिभरण
BATER BATER BABITER BATER BATER BATER BATER BATER BATER BATER BATER BATERITIOT को साथ सबै समावेशी
STOVEAINITS र STOCHI मा कालो समुद्रमा बोर्डिंग घरहरू!
ST3> STAVEAIIUIIN "ज्ञान", एडलर - कालो समुद्रबाट दुई चरणहरू
अन्य संक्षिप्तणहरू र कालो समुद्र
201 on मा यी स्टकहरू आवासको लागि आवासको लागि हो। अवस्थित पदोन्नति र छुटको साथ तपाईं सेक्सन मा पाउन सक्नुहुन्छ।
गर्मी छुट्टीको हव्वा र मेसिनको छुट्टीहरूमा धेरैले क्रासोडोर क्षेत्रको कालो समुद्री रिमासमा उच्च-गुणवत्ता छुट्टीको बारेमा सोच्दछन्। अद्दानको बोर्डिंग घरको आधिकारिक वेबसाइटले मस्कोबाट कालो समुद्री तटमा भएको राम्रो होटेलमा वाहक प्रस्ताव गर्दछ।
Santawishium भौंसी शहर को शहर को कालो समुद्री तट मा स्थित छ। उनले आफैलाई कालो सागरको एक होटल जटिल रूपमा स्थापित गरेको छ। अपनापक्श विपरीत, ल्याजरेभस्कीमा समुद्र धेरै क्रिकर हो, किनकि यो शहर केन्द्रबाट 20 किलोमिटर अवस्थित छ।
सोचीमा सेन्टोटियम कोटी "उच्च सान्त्वना" कोटीको साथ ", सबै सुविधाहरू" किफायती मूल्यमा "। त्यहाँ बोर्डिंग घर को क्षेत्र मा त्यहाँ छन्: पौडी खेल्ने पोखरी, जिम, खेल मैदान, बिलियर्ड कोठा, बच्चाहरूको कोठा।
होटल निजी समुद्री तटमा, दुई पौडी खेल्ने पोखरी, बार र चलिरहेको प्रकाशको साथ क्षेत्र पार गर्दै। तपाईंको कम्पनी खुसी हुनेछ!
Gazarevsky मा Gesesthus मा, त्यहाँ एक्लो, परिवार, बजेट, बजेट र प्रथम-वर्ग सिमहरूको लागि डिस्चार्ज चयना छ। त्यसोभए, तपाईं निम्न वर्गहरू बुक गर्न सक्नुहुनेछ:
दुई एकल बेड वा एक डबल ओछ्यानको साथ एक कोठा वा एक डबल ओहदाको साथ, जसमा हवाई, फ्रिज, टिभी, बाथरूम, जबरजस्ती बाथरूम, व्यक्तिगत सुरक्षित। अनुरोधमा, एक अतिरिक्त बेडरूम जारी गरियो।
क्षेत्र पूर्ण रूपमा सुसज्जित छ, त्यहाँ मनोरन्जनका लागि प्लेटफर्महरू छन्। पाहुनाहरूले समुद्र परिदृश्यको अनौंठो सुन्दरताको आनन्द लिन सक्दछन्, किनकि आश्रय एकदम किनारमा खडा, जस्तै चट्टानमा, जस्तै। तर समुद्री किनारमा वंशसँगै कठिनाई हुँदैन, किनकि त्यहाँ सुन्दर र आरामदायी भवहरू छन्।
<< p> सबै कोठाहरूको एक उर्जा र जुनियर सुइटहरू छन्, प्रत्येक एक विशेष शैली मा एक विशेष शैली मा। सबै अतिथिहरू छन्:
दृश्यहरूले सनस र बारबेक्युक्रिप्टको सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्। समुद्रको किनारमा यसको आफ्नै छ, पर्यटकहरूले पानीको शुद्धताको मजा लिन सक्छन्, नडराऊ कि उनीहरूको परिचयले विचलित हुनेछ। भ्याकेसनबाट ल्याइएको फोटोहरूले पारिवारिक स्पर्शहरूको संख्यामा प्रवेश गर्न सक्दछ र तपाईंलाई आत्मविश्वासका साथ समुद्रको साथ foros pranss को परिचित गर्न अनुमति दिन्छ।
यो सुन्दर पेन्स267 कोठामा 67 67 रूटहरूमा एनोस रिसोर्ट क्षेत्रमा अवस्थित छ, सेन्टोरिन्टियमको गाउँमा। यो वास्तवमै धेरै समुद्री किनारमा वास्तवमा वास्तवमा हो, तर यसले तपाईंलाई सुरम्य पर्वतहरूको प्रशंसा गर्न अनुमति दिन्छ। यसको क्षेत्र लगनशीलताका साथ आग्रह गरिएको छ, यहाँ रूखहरूको ठूलो आवाज, र गुलाबहरू - बोर्डि हाउसको एक व्यापार कार्ड।
<< p> एकै समयमा, आवासको रकम खगोलसाइजकगणित होइन, बरु मान्यता प्राप्त बजेट हुनुपर्दछ। "फोरो तट" मा खाना र बिना खालका खानाका लागि प्रदान गरियो। जब एक शक्ति यात्रा खरीद गर्दा पाहुनाहरू 3-समय कस्टम मेनू को प्रणाली द्वारा सेवा गरिन्छ। यस संस्थामा प्रायः प्रत्यक्ष संगीत बजाउँदछ।
<< p> यो टिकटको लागतमा उपयोगी छ, उसलाई शाब्दिक रूपमा केही मिटर। त्यहाँ सबै कुरा छ कि तपाईलाई आरामदायी मनोरञ्जनका लागि आवश्यक छ - क्यानपीटहरू र सूर्य बेड। यो उल्लेखनीय छ कि समुद्री किनार र खेल उपकरणको प्रयोगलाई निवासको दरमा समावेश गरिएको छ र थप खर्चहरू आवश्यक पर्दैन। चाहे जो प्रयोग गर्छन्, सेभास्टोपोलबाट एयर-कन्भेट्रेनको शानदार सेवा एलियाको भ्रमण कार्यक्रमले आयोजना गरेको छ। यस पेन्सन मा छुट्टी को बारे मा समीक्षा केवल नकारात्मक हुन सक्दैन।
fornos रिसोर्ट क्षेत्र ठीकसँगको सबैभन्दा फैशनेबल र फैशनेबल मानिन्छ। तर सबैले सस्तो, तर समुद्रको किनारमा सहज संक्रामक र उपनिवेशहरू प्रयोग गरेर फाइदा लिन सक्दछन्, क्रीयना उनीहरुका लागि सबै रूस जस्तै गर्व गर्छन्!
<< p> कालो सागर पेन्सन कोठा कोष एकै समयमा 3500 व्यक्तिको समायोजित गर्न डिजाइन गरिएको हो र विभिन्न कोटीहरूको कोठा चर्चा गर्नुहोस्, मा मानक 1-कोठाका सुविधाहरू देखि प्रशस्त 3-बेडरूम सुँगुरहरू प्रत्येक कोठाको संयुक्त बाथरूम समावेश गर्दछ स्नान, टिभी, फ्रिज, वातानुकूलित, क्याबिनेट फर्नीचर को एक सेट। धेरै संख्यामा एक लगगरिया छ। कोठाको विन्डोजबाट कालो समुद्रको एक आकर्षक दृश्य छ। सफाई दैनिक चलिरहेको छ, पास्स्टेल अंडरवियर र तौलिएको परिवर्तन - 1 समय3दिनमा।
पेन्सन "कालो समुद्री" यसको क्षेत्रमा विकसित पूर्वाधारको लागि विकसित पूर्वाधार हो र निम्नलिखित भुक्तान र नि: शुल्क सेवाहरू प्रयोग गर्न पाहुनाहरू प्रदान गर्दछ:
जसले कोटीबाट संस्थाबाट संस्थालाई रुचाउनु पर्ने ठाउँ छनौट गर्दछ, जसमा तपाईं केवल आरामदायी कोठाहरू हिउँन सक्नुहुन्न, तर खाना अर्डर गर्न पनि पोखरीको प्रयोगको रूप, खेलकुद सूची र अन्य चीजहरू। आवासको एक प्रकार, जसले सबै सूचीबद्ध मापदण्ड पूरा गर्दछ कालो समुद्री तटमा बोर्डिंग घर हो।
बोर्डिंग हाउस अन्तर्गत आवास र पोषणको साथ पाहुनाहरुलाई प्रदान गर्दै पर्यटक जटिललाई बुझ्ने।
कालो समुद्री किनारमा सबै भन्दा राम्रो पूर्वाग्रहहरू आफ्नै समुद्र तट क्षेत्र छ जसमा क्यानफास, सूर्य ओछ्यानमा छन्। र पक्कै पनि, निजी तटीय क्षेत्र नियमित रूपमा फोहोर, एल्गा र अन्य चीजहरू शुद्ध गरिन्छ। कहिलेकाँही पानी यातायात र माछा मार्ने उपकरणहरू उपलब्ध छन्।
कालो सागरको साथ मनोरन्जनका लागि पेनन्सहरू पनि समानताका साथ पाहुनाहरू खास सेवाहरू प्रदान गर्न तयार छन् (बच्चाहरूको मेनू, एनिमेसन, आदि)।
<< p> सामान्यतया, विश्लेषण गरिएको होम वर्गमा लामो स्तरको सान्त्वनाको साथ लामो अवधिको स्वायत्त आवास समावेश छ।
<< p> कालो समुद्री तटरमा सबै निवृत्तिभरणहरू सबै बर्षे राउन्डमा काम गर्दछन्, केवल ती स्वास्थ्य सेवा कोठा समावेश छन्।
ओडेसा, सेर्गेविका र केही अन्य बस्तीहरूमा त्यस्ता प्रकारका संस्थाहरूले जहाँ प्राकृतिक-मौसम धन-सम्पत्तिहरू धेरै भविष्यवाणी संस्करण र कमिरेटियमहरू आउँदैनन्।
परम्परागत रूपमा, उनीहरूको आफ्नै समुद्र तटको साथ कालो समुद्री पेन्जहरू तातो मौसममा सबैभन्दा लोकप्रिय छ, जुन गर्मीमा हुन्छ।
<< p> जसले गर्मीलाई नराम्रो महसुस गर्छन्, त्यहाँ कोही पनि छैन - धेरै जसो पर्यटक जटिलताहरू यार्डको हरियामा अवस्थित छन्, जहाँ गर्मीबाट लुक्ने छन्।
धेरै केसमा बोर्डि setting स्कूलमा आवासको लागि आवासको लागत बढ्दछ सान्त्वनाको स्तर अनुरूप होटेल र होटेलमा नम्बरहरू सस्ता हुन्छन्।
पावरलाई अलग तिर्ने गरिन्छ। क्यानन्सहरू र क्याफेहरूमा खाजा खाजा, खाजा र डिनरको डिनरको खाजा 300--500 युज हुन सक्छ। प्रति दिन, रेस्टुरेन्टहरूमा - 1-2 हजार युह।
बर्षसम्म, कालो सागरमा बोर्डिंग घरहरूले उनीहरूको लोकप्रियता गुमाइरहेका छैनन्, हजारौं यात्रुहरू वार्षिक रूपमा भ्रमण गरिएका छन्। यो विश्वास गर्न यो अनुचित छ कि केवल ब्ल्याक समुद्री तटहरू पर्यटकहरूकहाँ आकर्षित हुन्छन्, समुद्री सतह मध्ये एक निश्चित रूपमा सीमित छैन।
मनोरन्जन पेन्सन कालो समुद्री सतह को लागी छनौट गर्नुहोस् र सक्रिय मनोरन्जन र खेलहरू मन पराउँछन्। धेरै बोर्डिंग घरहरू तटमा भागमा अवस्थित छन्, तिनीहरूको आफ्नै त्रास र पानी खेलकुद केन्द्रहरू छन्। छुटकारा दिनेहरूले चाखलाग्दो समुद्री यात्रा गर्दछ, माछा मार्ने र डाइभिंगका लागि सब भन्दा चाखलाग्दो ठाउँहरू।
पेन्सन कालो समुद्रमा रूसमा प्रस्तुत गर्नेहरूलाई रिकभरीमा रुचि राख्नेहरूलाई आकर्षित गर्दछ। ती मध्ये केहीको आफ्नै उपदेशित केन्द्र छ, जबकि अन्य उपचार खनिज र माटोका स्रोतहरूमा घनिष्ठतामा छन्। यस्तो बोर्डिंग हाउसमा टिकट किनें, तपाईं प्रत्येक दिन सुरक्षित चिकित्सा प्रक्रियाहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ र स्वास्थ्यलाई सुदृढ पार्न सक्नुहुन्छ।
<< p> यो विशेष गरी दाँयामा कालो सागरमा बोर्डिंग घरहरूलाई ध्यान दिन लायकको छ, जुन देशमा सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ। अपराधको प्रायश्चित्युपन यसको उपचार गर्ने मौसम, सुरम्य बेडहरू, एक प्रशस्त आकर्षण र मनोरन्जनका लागि प्रशस्तता हो। क्रिमियाको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता पहिलो-वर्ग धामिनेशियम, स्थानीय बोर्डिंग घरहरू हुन्, किनकि स्वस्थ मनोरन्जनका लागि यो असम्भव छ।<
कुन आकर्षक सुविधाहरू मा कालो सागरमा बोर्डिंग घरहरूमा बाँकीहरू हुन्? सर्वप्रथम, यो उच्च स्तरको सान्त्वना र सस्तो मूल्यहरूको उच्चस्तरीय स्तरको ध्यान दिनु लायक छ। पर्यटन मौसमको उचाईमा पनि बोर्डिंग घरहरूमा मनोरञ्जन लागत एक किफायती स्तरमा रहन्छ। धेरै लोकप्रिय अगमतपत्रहरूले "सबै समावेशिक" प्रणालीको सेवा गर्दछ, जुन बचत गर्ने उत्कृष्ट तरिकाले पनि पाहुनाहरूलाई सेवा गर्दछ। कालो समुद्रको सस्तो निवृत्तिभरणहरू छनौट गरिनु पर्दछ, मूल्यहरू जुलाई र अगस्तमा चरम स्तरमा पुगे।
मनोरन्जनको ठूलो चयन स्थानीय बोर्डिंग घरहरूको अर्को आकर्षक सुविधा हो। तिनीहरूको संख्याको ठूलो संख्यामा सुसज्जित क्षेत्र छ जसमा एक पौडी खेल्ने पोखरी, यसको आफ्नै समुद्र तट, खेल मैदान र बच्चाहरूको लागि खेल मैदानहरू - सबै जानकारी आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध हुन्छ। विभिन्न बिचका बिचहरू अपराधमा प्रस्तुत हुन्छन्: ढु ke ्गा, बालुवा, माटो, कपडा, जंगली र विशिष्ट ठाउँ छनौट गर्न गाह्रो छैन। उदाहरण को लागी, को बारे मा एक लेख।
कालो समुद्रमा मस्को बोर्डिंग घरहरूमा आराम गर्नेहरू, धेरै सकारात्मक भावनाहरू र नयाँ प्रभावहरूको ग्यारेन्टी गरिएको छ। कालो समुद्री रिसोर्टहरू अविश्वसनीय सुन्दर, आरामदायक, आधुनिक विकसित र विविधतामा छन्।
cla> कालो साग्रामा चढ्ने घरहरू पर्यटनमा बजारको ठूलो क्षेत्र हो र यो लामो समयसम्म कुरा गर्न सम्भव छ। तर आज हामी एडलर (SOCHI रिसोर्ट्स) मा सेन्टोटियरियर र बोर्डिंग घरहरू विचार गर्नेछौं र कालो सागरमा अन्य रिसोर्टहरूको लागि बोर्डकिंग घरहरूमा केही महत्त्वपूर्ण विवरणहरू पूरक गर्नुहोस्।
<< p> यसले तपाईंलाई सेन्टोटियम र कालो सागरमा बोर्डिंग घरहरू राम्रोसँग नेभिगेट गर्न मद्दत गर्दछ र छिटो उत्तम सम्झौताहरू चयन गर्नुहोस्!
पहिलो, यो एक सेनेटोरियम हो, र संयमी एकदम राम्रो छ। हामी संयन्त्रमा "ज्ञान" मा "ज्ञान" भन्ने तथ्यको बारेमा कुरा गरिरहेको छैन - यसैमा, कतारियम पक्कै पनि कालो सागरमा अन्य नियमवीय हो।
पाहुनाहरू र साझेदारहरू, र हामी सेन्टोइटियम "ज्ञान" बाट पनि सराहना गर्न सक्दछौं "सेवाहरूको सेट र मूल्यको बीचको उत्तम संयोजनहरू। यदि तपाईं आफ्नो स्वास्थ्य सुधार गर्न चाहानुहुन्छ, शक्ति, उर्जा, उर्जा र यो सबै छ महिनाको लागि, एक वर्षको लागि यो सबै तयारी, एक वर्ष को लागी तत्काल "ज्ञान" * * मा ध्यान दिनु पर्छ।
यो यहाँ तल जान्छ कि कालो समुद्रको सबैभन्दा निकटतामा तपाईंको स्वास्थ्यमा निम्न प्रश्नहरूमा काम गर्न:
तर कनेटोनियम "ज्ञान" मा तपाईको एन्डोआरिनिनोलोजी, सास फेर्न अंगहरू, तपाईंको परिवारका साना सदस्यहरूको लागि बच्चा स्वास्थ्यमा मद्दत गर्दछ ...
STAVICIM मा "ज्ञान" को अतिरिक्त अन्य संयमशीलताहरु र कालो समुद्रका भविष्यवाणीहरू छन्, कनेटियरियम, संयमी संचालित "Okyybersky", संयमी "अभिनेता" ...
बोर्डिंग घरहरू बीचको भिन्नता - सुविधा, ठाउँ, चिकित्सा आधारको क्षमता स्तरमा। तर कालो सागरमा माथि उल्लेखित स्वास्थ्य रिसोर्टहरू र कालो समुद्रमा सबै अन्य संचालित स्वास्थ्य रिसोर्टहरू, हाम्रो स्वस्थ विश्वको वेबसाइट - लोकप्रिय र प्रसिद्ध वस्तुहरू। हामी तपाईंलाई जहिले पनि तपाईंको लागि सब भन्दा उपयुक्त छनौट गर्न मद्दत गर्दछौं। प्लेसमेन्ट र मेडिकल कोर्स को विकल्प!